Sidee ayay Dadka DDS u arkaan Xuska Maalinta loogu magacdaray 'Kaaraamardha'?
Maanta dalka Ethiopia waxaa laga xusay maalin ay ugu magac dareen 'Kaaramardha', taasi oo lagu muujinayo in dalwadda Ethiopia ay guul ka gaartay ciidamado Soomaali ah oo 'dalkooda duullaan ku soo qaaday'.
Hase yeeshee dadka deegaanka ayaa u arka in arrintu aanay ahayn sida ay dawladda Ethiopia u dhigayso, iyaga oo sheegaya in dad badan oo deegaanka u dhashay si gardarro ah ciidanka Ethiopia ay u dileen.
Dhinaca kale, waxaa dhawaan Ismaamulka Soomaalida lagu xir-xiray siyaasiyiin isku magacaabay xisbiga Barwaaqo garabkiisa sixidda.
Maxamed Cabdi Sandhere ayaa haddaba arrimahan ka wareystay Xirsi Cabdulqaadir Maxamed oo horay uga tirsanaa baarlamaanka federaalka ee Ethiopia oo hadda ku sugan magaalada Jigjiga. Xirsi wax uu ugu horeyn ka hadlayaa xuska maalintan.
Halkan ka dhageyso wareysiga xildhibaanka